Aqriso Liiska dhawr wasaaradood oo lagu soo kordhin doono golaha wasiirada cusub - Caasimada Online
Home Warar Aqriso Liiska dhawr wasaaradood oo lagu soo kordhin doono golaha wasiirada cusub
Aqriso Liiska dhawr wasaaradood oo lagu soo kordhin doono golaha wasiirada cusub
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa dhawaan la filayaa in lasoo magacaabo golaha wasiirada, waxaana howshaas ku mashquulsan Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kheyre ayaa ku jiro wadatashiyadii ugu dambeeyey oo uu kusoo xulayo golaha wasiirada waxaana la filayaa inuu dhawaan saxaafadda usoo bandhigo.
Haddaba caasimadda Online ayaa heshay xog cusub oo muujineyso wasaarado cusub oo lagu soo daro doono golaha wasiirada cusub xilli la filayey inay aad u yaraadaan wasiirada xukuumadda Kheyre.
Xogtaan ayaa waxaan ka helnay illo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku dhaw dhaw xafiiska Ra’isulwasaaraha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga filayey inuu Ra’isulwasarahe Kheyre kala tashan doono in wasiirada lasoo koobo sidoo kalana laga dhigo mid la mid ah xukuumaddii tayo ee uu Ra;isulwasaaraha u ahaa Farmaajo.
Wasaaradaha cusub ee lasoo kordhiyey ayaa waxaa ugu dambeysay xiligii ay Soomaaliya ka jirtay dowladdii kumeel gaarka aheyd, kumana aysan jirin dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud ee dhawaan waqtigeeda dhamaaday.
Haddaba halkaan hoose ka aqriso wasaaradaha la filayo in lagu soo daro golaha wasiirada ee uu Kheyre howsheeda wado:
Wasaaradda Bii’ada iyo ka hortagga musiibooyinka
Wasaaradda Hub dhigista iyo dhaqan celinta
Wasaaradda Dalxiiska iyo Duurjoogta